Lionel Messi oo bixiyay Mushaarka Waardiyeyaasha gaarka ah ee xulka Qaranka Argentina (Waa maxay sababtu?) – Gool FM
Lionel Messi oo bixiyay Mushaarka Waardiyeyaasha gaarka ah ee xulka Qaranka Argentina (Waa maxay sababtu?)
(Buenos Aires), 20 Nof 2016 –Wararka ka imaanaya Argentina ayaa waxay sheegayaan in Weeraryahanka Barcelona ahna Kabtanka xulka Qaranka Argentina Lionel Messi uu jeebkiisa mushaar ka siiyay Waardiyeyaasha gaarka ah ee Xulka Qaranka Argentina.
Xiriirka Kubadda Cagta Argentina ‘AFA’ ayaa maraya xaalad hoos u dhac ah oo aad u weyn muddo 2 sanadood ka badan tan iyo markii uu dhintay Guddoomiyihii xiriirka Kubadda Cagta dalkaasi Julio Grondona isla markaana ninkii beddelay ee Luis Segura lagu soo eedeeyey musuq maasuq.
Tababarihii hore ee xulka Qaranka Argentina Gerardo Martino ayaa la sheegay inuusan wax mushaar ah qaadan muddo 6 bilood ah ka hor Koobkii Ameerika xilli ciyaareedkan, halka Tababaraha Olombikada Argentina Julio Olartioechea uu sheegay Bishii August in isaga iyo Istaafkiisa midna aan mushaar la siinin.
Haddaba sida uu ku warramayo Joornaaliistaha Argentine, Juan Pablo Varsky waxaa cirka isku sii shareeraysa hoos u dhaca dhinaca dhaqaale ee Kubadda Cagta dalkaasi taas oo keentay in Waardiyeyaasha xulka Argentina ay caawimaad weysdiistaan qaar ka mid ah xiddigaha xulkooda ka hor kulankii isreeb-reebka Koobka Adduunka ay toddobaadkii hore la yeesheen Brazil.
“Lionel Messi waxa uu ku jiray qolkiisa uu ku sugayay ciyaartii Brazil ee Belo Horizonte markii albaabka loo soo garaacay” Varsky ayaa u sheegay Radio Spanish-ka laga leeyahay.
“Waa saddex qofood oo dhammaantood ah Waardiyeyaasha xulka Argentina, waxayna ku yiraahdeen ‘Leo, waxaan doonaynaa in aan kula hadalno. shan illaa lix bilood mushaar nalama siinin, xaaladdu way isku cakiran tahay, adiga ayaa ah Kabtanka xulka, waa na garanaysaa waxaan ku weydiisanaynaa inaad na caawiso”.
Varsky waxa uu yiri; Messi durbadiiba waxa uu la hadlay Aabihiis oo uu ka codsaday in uu lacag siiyo Waardiyeyaasha xulka iyadoo warbaahintuna sheegeyso in Messi uusan doonaynin in arrintaasi uu daboolka ka qaado waloow xiriirka AFA ay ahayd inuu mushaaraadkani bixiyo.
Lionel Messi ‘personally covers unpaid wages of Argentina national team’s security staff’ https://t.co/e1i54uhBDj pic.twitter.com/UZTb0aZJ8d
SERIE A: ACM VS INT 2-2...Perisic oo beeniyay guul Milan usoo carfaysay + Sawirro